बाख्रा बाँध्ने खोरमा थुनिएका मन्दिपको उद्धार – || koselinews.com ||
May 19, 2019 Loksari kunwar health, main_news, News 0
काठमाडौं । श्रीमान श्रीमतिको पारपाचुके भयो । छोरा मन्दिपको पालनपोषण आमाले गर्नेगरी गरी मुद्दा छिनोफानो लाग्यो । जन्मदै बौद्धिक अपाङ्गता भएका मन्दिपको अगाडि आमाको मातृवात्सल्यता पनि टिकेन । अन्ततः मन्दिपको आमाले दोस्रो विवाह गरिन् । मन्दिपको बुबाले पनि अर्कै श्रीमती ल्याए ।
बुबाले नयाँ आमा पाए, आमाले नयाँ बाबा पाए तर मन्दिपले भने नयाँ आमा बाबा पाएनन् । शारीरिक रुपमा स्वस्थ र राम्रो भएकै कारण मन्दिपको दाई मनोजलाई उनका काकाले हेरीदिए । तर मन्दिपको भने अवस्था कहालीलाग्दो नै थियो ।
अन्तमाः हजुरबा हजुरआमाले बच्चालाई हेर्न प्रयत्न त गरे तर यो उनीहरुको सामर्थभित्रको कुरा थिएन । त्यसैले मन्दिपले बाख्रा बाँध्ने खोरमा थुनिनु पर्यो । यो घटना तारकेश्वर नगरपालिका १० नं. वडा, हिलेको हो ।
शरीरले काम गर्न छाडीसक्यो । आम्दानीको कुनै स्रोत छैन । सके पनि नसके पनि अरुको माटो खोस्र्रेर विहान बेलुकाको छाक टार्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘दिनभरी नातिलाई हेरेर बस्न सक्ने अवस्था छैन । नातिको माया नभएको होइन । मायाले मात्र केही नलाग्दो रहेछ’ गहभरी आँसु पार्दै मन्दिपका हजुरबुबा गिता बल्लल भकानिए । उनीहरुले ४ महिनादेखि मन्दिपलाई बाख्रा बाँध्ने खोरमा राख्दै आइरहेका थिए ।
जस्ताले छाएका करिब ५ फिटे अस्थाइ टहरेमा बाँसको खोर बनाइ मन्दिपलाई थुन्ने गरिएको थियो ।
मन्दिपका लागि आमाबाबा त बैरी बने नै, उनको दुवै कानले पनि सुन्दैन । धेरथोर आँखा देख्ने मन्दिप आफ्नो शरीर आफै राम्रोसँग थाम्न सक्दैनन् । उनलाई औला चुस्ने बानी लागेको छ । सदै औंला चुस्ने गरेकोले दुईओटा औलाको छाला अत्यन्त कमजोर देखिन्छन् ।
‘घरमा एक्लै छाडेर काम गर्न गए कहाँबाट लड्ने हो, कसको घरमा गएर के विगार गरिदिने हो भन्ने डर हुन्छ । केहिदिन अघि कसो इनारमा खसेन । हामीलाई मर्नु न बाँच्नु भएको छ’ हजुरबुबाले थपे ।
मानवसेवाले गर्यो उद्धार
मन्दिपको बारेमा आश्रमलाई खबर भयो । आज जेठा पाँच गते विहान पत्रकार राजकुमार सिग्देल, सुजन पन्त, अधिवक्ता राजु थापा, स्थानीय वडा अध्यक्ष अमृत थापा लगाएतको उपस्थितीमा मानवसेवा आश्रमले मन्दिपको उद्धार गरेको छ ।
हाल मन्दिपलाई मानवसेवा आश्रमको सामाखुशी शाखामा राखिएको छ । आजबाटै स्वास्थ्य परीक्षण गराई उपचार सुरुवात गरिने मानवसेवा आश्रमका ३ नं. प्रदेश संयोजक सुमन बर्तौलाले बताए ।